Waxyabahe ilma iska soosarida - Kaniiniga ilmo iska soo ridid
Waxyabahe ilma iska soosarida Dalalka aduunku waxa ay leyhiin sharcyo ugaar ah ilma iska sooridka amaba qadashada kiniinka ilmaha la’iskaga soorido. Dalalka uu ka sharciyasanyaha ilmo iska sooridka waxa dadka toos u siiya dhakhaatiirta mifebiriistoon iyoo misobrostool hadii loobaahido uur 10 toodobaad jiray lo’iskasoosaaro waxa ladoorbida qaadashada kiniinka miisorostolin isaga oo kaligii uun laqaadanago. Mana daremi kartid xaalad kaduwan kuwa la isku arka marka sida cadga ilmaha la’iskagasoo saaru. Waan mid natiija wanaagsan Dawaynta noocan waa mid kiniinka inta lagudhajigo ilmagaleenka xagiisa hore dabadeedna uu ilmagalenkas iska uruur si umarka danbe ilmaha uurka kujira dibada asooriixo hadii la’adeqsado kiniinka miisobroostool islamarka ay jidhka hoos u siigalaan kiniinada hore ee laqaato waxa ladereema. Sidaads awiged hawenka kiniinkan iskood u isticmaala uma keni karo wax dhibaata ah.
Kininada loo’isticmaalo ilmo iskasoordka kadib marka lagaliyo ibta waxa uu ilmaglenka ku abuur daree uu isku koogo dabadeedna ilmaha dibada u soo rixo
1-2 saco gudahood wareen amaba dhiig kaayimaada waxa lagayaaba ilmuhu in uu kaasobo mudo 24 socadood dabadeed marka aad qaadatid kiniinada miisobroostol marka qaarkood waxa dhikarta in uu ka soohoreyo 24 sacadoodba waxan haboon in la lahubyo dhiiga soobaxay in uu jiru waxmada amaba cadaan ah ku duubanyhiin waxana dhckarta in uu soobaxay wixii limagalenka kujiray waxan dhickarta in uu lekaankaro cidida suulka in leg